Ebe ị ga-aga na ezumike ezumike | Akụkọ njem
Ebe ị ga-aga na ezumike ezumike
Mariela Carril | | Atụmatụ, General, njem
El Oge ezumike Ọ dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ oge ahụ di na nwunye na-enwekarị ahụ iru ala ma nwee ike nweta udo n'ikpeazụ. Nkwadebe maka agbamakwụkwọ kpochapụwo na oriri, nnabata na ọtụtụ ndị ọbịa bụ n'ezie ike!
Ebe ebe ezumike ezumike na-adabere na mmefu ego, isi. Ma nrọ na ịmara ntakịrị ihe adịghị efu ihe ọ bụla iji see nọmba ma mara ndepụta anyị ebe aga na a honeymoon.
4 Osimiri Pacuare, Costa Rica
5 Sintra, Portugal
10 Amalfi n'ụsọ oké osimiri
Osimiri anaghị efu n'ụdị ndepụta ndị a. Kedu onye na-adịghị amasị ka anwụ na-achịkọta ya na oké osimiri na-arọ nrọ na ebe ntụrụndụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ boutique?
Habrour Island na Bahamas Ọ mara mma, nke nwere obere obodo nwere okporo ámá juru eju, obere ụlọ mara mma, ụlọ ahịa ... Ọ bụ ebe mara mma nke ndị America na-akpọ "Nantucket nke Caribbean".
Hawaii na-emesapụ aka na ịma mma ya na ihe nkiri ya n'ihi na o nwere site na ugwu mgbawa na mmiri mmiri ruo n'ụsọ osimiri nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba niile.
Hawaii bụ ebe mara mma n'ime njem ezumike ezumike n'ihi na ọ bụ ya oke okpomọkụ, omenala ha bụ ngwakọta nke Omenala America nwere omenala Pacific na ị nwere ike na-enweta ma anyanwụ na ájá dị ka njem, sọfụ o rafting.
Like na-amasị gị Safaris na anụ ọhịa? Afrika mgbe ahụ ọ bụ akara aka gị kacha mma. Mgbe ahụ ị nwere ike ịga Victoria Falls nke oke osimiri Zambezi kere. Canyons, okooko osisi okpomọkụ, anụ ọhịa mara mma.
A na-ekpughe Victoria Falls nke nta nke nta na na njem ọ bụla a na-enye ndị ọbịa, otu onye maara akụkụ ọzọ nke ha. Yabụ, ma ị nwere ike ife n'elu mmiri, ma ọ bụ ị nwere ike ịrị elu ugwu ma ọ bụ banye n'ọdọ mmiri Ekwensu ma ọ bụ mee. rafting.
Upstream bụ a ebe obibi dị egwu. N'ebe a, ị ga-ahụ ka oke ọhịa mmiri ozuzo si atụgharị na savana enyí, hippos na agụ iyi. Ihe a niile dị nso n'ọnụ ụlọ gị, enwere ọbụna otu nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri iji kwado ụgbọ mmiri ahụ.
Ọ bụ niile - gụnyere ebe ntụrụndụ ya na ndu, ụlọ mmanya na onye na-aṅụ mmanya. Aha ya Tongabezi.
Osimiri Pacuare, Costa Rica
Ohia mmiri ozuzo Bajo Tigre ọ nweghị ọkụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ na-ezobe ebe obibi na-agaghị echefu echefu: na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Pacuare, saịtị a ghọtara dị ka otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma n'ụwa.
Ọ bụ na Pacuare River na-agbada na-eme ụdị III rafting. Nke ọnụ ụlọ dị na osisi na echiche nke ikuku, oké ọhịa na osimiri, na ọbụna site na otu ị nwere ike ima elu n'ime onwe ọdọ mmiri mgbe ị na-ahụ toucans.
Kwa ụbọchị ị nwere ike ibi ndụ ọhụrụ ma ọ bụ zuru ike na spa ma ọ bụ gaa eriri site na osisi gaa na osisi. Ihe niile e nyere ebe a bụ organic, na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi, na nke sitere na mpaghara. Nke mere na n'abalị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkụ eletrik na ee ọtụtụ narị kandụl.
Ọ dị kilomita ole na ole site na Lisbon na-ele anya n'oké osimiri Sintra, ebe etiti oge ochie nwere otutu akụkọ ihe mere eme na nleta si setịpụ ụgbọ elu mba
Nke a bụ nnukwu ụlọ Moorish sitere na narị afọ nke XNUMX, dị n'elu obodo ahụ, nke ọmarịcha ọhịa mara mma nke Eze Ferdinand II gbara ya gburugburu, n'ụdị ịhụnanya. Ị nwere ike ịrịgo na Pena Palace, na Disney architecture, gaa na narị afọ nke XNUMX Capuchin Convent, ubi-vine ma ọ bụ nọrọ na ọmarịcha osimiri nke Azenhas do Mar.
El Obí Tivoli nke Seteias ọ ga-eme ka ọ dị gị ka eze ruo nwa oge, ya na mgbidi narị afọ nke XNUMX na nnukwu ọnụ ụlọ.
Ma ọ bụ na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia enweghị ike ịpụ na ndepụta anyị. N'akụkụ nke ọzọ nke Oké Osimiri Andaman bụ osimiri a mara mma nwere ọkara ndị njem nlegharị anya dịka Phuket na-ewu ewu.
Ọ dị n'akụkụ ala mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke nwere ọtụtụ okwute iji rịgoro ma na-efegharị nke ukwuu jụụ. Ọ bụ a nnukwu ebe ị ga-amaba n'oké osimiri, na-eme 00 ndakpu mmiri, ma ọ bụrụ na ị naghị amasị ụdị adrenaline a, ị nwere ike ịga sunbathe n'akụkụ osimiri Tonsai, mgbe mmiri dị obere, mee ya. abalị snorkel ịnụ ụtọ ya bioluminescent plankton ma ọ bụ zuru ike n'ọgba Phra Nang, otu n'ime osimiri kachasị mma n'ụwa.
Nke a bụ Ụlọ ọrụ Rayvadee, obere na nke oke okomoko nwere Villas n'ala na ọdọ mmiri na ebe a na-ere nri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ime ọgba. Na-enye ngwugwu ezumike ezumike.
Kaadị ozi kacha mma nke Maldives bụ bungalows na-ese n'elu oke osimiri turquoise na okomoko ọ rọrọ nrọ. Ya mere, ọ bụ maka izu ike, ịnụ ụtọ, iri nri, ịwụ mmiri, igwu mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, iri nri n'akụkụ osimiri site na kandụl, na-efunahụ n'echiche nke ọdịda anyanwụ.
Omuma ọzọ. Santorini, karịsịa maka nnukwu echiche na mbara igwe. Mana ọ bụrụ na ịga Greece, ị ga-agarịrị Delphi na maka Atenas ma ọ bụ mee obere njem ụgbọ mmiri site na agwaetiti nke nhọrọ gị.
Cheta na na Gris e nwere ọtụtụ agwaetiti na nke ọ bụla pụrụ iche, ya mere, ọ ga-adabere na ụdị njem ị na-achọ na onye òtù ọlụlụ.
Ebe njem n'ụsọ osimiri dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike imefu ego karịa wee fega n'ihu, ọ na-akawanye mma. Ònye nwere ike ikwu na Fiji abụghị ihe kacha mma? Enwere agwaetiti 333 ịhọrọ site na ya Ma ihe niile na-agbagharị gburugburu oké osimiri: coral, sọọfụ, snorkeling, mmiri mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, osimiri ...
Ihe dị mma banyere Fiji bụ na ọ dị anya, ya na-ebunye mmetụta ahụ nke ịgbala ọtụtụ puku kilomita site na ebe ihe niile na-ada ihe dị iche.
Amalfi n'ụsọ oké osimiri
Ọ bụrụ na-amasị gị Europe na karịa ihe ọ bụla mara mma Europe mgbe ahụ Amalfi n'ụsọ oké osimiri bụ maka gị. Obodo ya, ụzọ ya, ụsọ oké osimiri ya siri ike, ohere nke iji ụkwụ ma ọ bụ ọgba tum tum eme njem ma ọ bụ ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri, na osimiri 100 ya na-enyere aka mee ka ọ bụrụ njem ezumike ezumike.
Iji zere ọtụtụ njem nlegharị anya abanyela n’oge ọkọchị n'ihi na obodo 13 niile dị n'ụsọ oké osimiri mejupụtara Amalfi Coast na-agbawa ndị njem nlegharị anya na ụzọ SS163 dị ka okporo ụzọ. Positano, Ravello, Amalfi, Minori, Cetara ...
El Caribbean French Ọ bụkwa ndị di na nwunye ọhụrụ na-ahọrọ ya n'ihi na ọ maara otu esi ejikọta ihe abụọ: okomoko na ikuku dị jụụ ma dị jụụ. Osimiri ndị ahụ na-arọ nrọ, ha na-ewepụ ume gị ma enwere ihe na-amasị gị niile.
Enwere ọtụtụ egwuregwu mmiri, dịka ọmụmaatụ na Anse de Grand Cul de Sac, yana ihe dị jụụ na nke nzuzo na Anse de Colombier. Na ọbụna a osimiri gba ọtọ, Ande de Grande Saline.
N'ezie anyị na-ada ada na ndepụta nke ebe aga na honiimuunu. Enwere ọtụtụ puku ebe ọzọ! Mana anyị chọrọ ime nhọrọ n'etiti Europe, Asia na America. A hapụla anyị China ma ọ bụ Japan, Egypt, South America ma ọ bụ ọbụna Iceland, mana a bịa n'ihe gbasara ewu ewu, ndị a na-anọkarị n'elu. chioma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebe ị ga-aga na ezumike ezumike
Ebe obibi ndị mọnk Kiev Caves
Ebe nkiri Sagunto